Lapho ugesi ushibhile, ungakhokha kanjani kancane futhi ulungise uhlelo | Ezezimali Zomnotho
USusana Maria Urbano Mateos | | Amandla
Isikweletu sikagesi singesinye sezinto ezizondwa kakhulu ngabaseSpain, futhi akumangalisi ukuthi: sineminyaka yokwenyuka okuqhubekayo kwentengo kagesi. Abanye abezindaba bakuqinisekisile lokho imele u-40% wemali engenayo yemindeni eminingi nelungu elilodwa okungenani elingasebenzi.
Futhi ukuthi ukwazi ukuthi ugesi ushibhile kangakanani, akuseyona inkokhelo yokonga, kepha kunesidingo, kungakhathalekile inani lemali elingena kwi-akhawunti yakho yasebhange inyanga ngayinye, noma inani ongangeni kulo.
Kulesi sihloko sizozama ukukusiza ukuthola ukukhanya kushibhile nini, kodwa futhi uqonde ukuthi kungani kunzima kangaka ukwazi, kangangoba, kwesinye isikhathi, ngisho nochwepheshe bezinkampani ezihlukile zikagesi abakwazi nakanjani.
1 Inselelo yokuqonda isikweletu sikagesi
2 Ibalwa kanjani i-invoyisi yakho
3 Ibalwa kanjani ingxenye eguquguqukayo ye-invoyisi?
4 Ukukhanya kushibhile nini
5 Isixazululo esizedlula zonke: intela ekhishwa ngokubandlululwa ngehora
Inselelo yokuqonda isikweletu sikagesi
Akunandaba ukuthi ngabe inkontileka yamandla kagesi Unayo ne-Iberdrola, i-Endesa, noma enye into: ukuqonda isikweletu sikagesi kuyinselele. Ngakho-ke, lapho isikweletu sakho sifika ekhaya, futhi ungasiqondi, akuyona inkinga yakho, sonke sinayo leyo nkinga.
Ukuqonda isikweletu sikagesi kubalulekile ekuqondeni kamuva ukuthi intengo ibalwa kanjani, nokuthi ugesi ushibhile kangakanani.
Kulungile, ake sifike kukho.
Sincoma ukuthi ube ne-invoyisi yakho bese uqhathanisa noma udwebele idatha esikushoyo ukuze kube lula kuwe.
Imininingwane yomnikazi wenkontileka, njengegama, ikheli le-DNI noma i-NIE, inombolo yenkontileka, inombolo ye-invoyisi, isikhathi sokukhokha, njll.
Linganisela uhlobo lwenkontileka yakho
Ngegama lenkampani uzokwazi ukwazi uhlobo lwamanani onawo kwinkontileka yakho, uma ingakutsheli ngokuhamba kwesikhathi: Intengo Yokuzithandela Yomthengi Omncane (PVPC) noma imakethe yamahhala. I-PVPC inikezwa yi: Hidrocantábrico Energía Último Recurso, Iberdrola Comercialización de Último Recurso SAU, Endesa Energía XXI SLU, Unión Fenosa Metra SL no-EON Comercializadora de Último Recurso.
Uzobona isifinyezo esincane sokuthi ingqikithi yesikweletu sakho sikagesi ibalwe kanjani. Uzobona ukuwohloka okuncane kokuthi kukhokhiswe kanjani, ubona ukusetshenziswa kwakho, intengo nge-kilowatt nezinye izinto.
Umbiko wokusetshenziswa kukagesi
Manje uzobona ukuwohloka okuphelele kokusetshenziswa kwakho, amanani, amakhomishini, izinsizakalo ezinenkontileka, umlando wokusebenzisa, lapho ezinye izinkampani zibala ukusetshenziswa kwakho kwansuku zonke ngendlela yemali. Ungaqhathanisa ukusetshenziswa kokuzivocavoca kwamanje nokufana konyaka odlule.
Lapha uzobona kahle yonke idatha yesivumelwano sakho, njenge, ngokwesibonelo, ukwazi ukuthi unenani elinqunyiwe, ngokubandlululwa kwehora, inombolo yocingo yensizakalo yezobuchwepheshe, noma uma usunayo imitha 'ehlakaniphile' (yebo, kumamaki wokucaphuna), inani le-CUPS ukubona ukusetshenziswa kwakho kwi-inthanethi ngesikhathi sangempela.
Enye idatha evelayo imane ifundisa, njengegrafu yokusebenzisa, izaziso zenkampani, ukukhangisa, noma yini inkampani ebona ifanele.
Ibalwa kanjani i-invoyisi yakho
Okokuqala, kufanele ubone, kumthethosivivinywa wakho, amandla anenkontileka kanye nohlobo lokukhokha noma intela onayo, ngaphezu kwamandla anikwe izinkontileka, okuyinombolo yama-kilowatts anikezwe opharetha wakho, iyafana namamegawathi wesilinganiso sedatha yakho yeselula, futhi kuya ngokuthi ungavula amadivayisi amangaki ekhaya lakho. Amandla angaba ngu-3300w, 4400w, 5500w noma 8000w.
Ukubalwa kwentengo yamandla akho kagesi kubalwa ngokuphindaphinda:
Amandla anenkontileka (ku-kW)
Isikhathi, njalo ngenyanga, kabili ngenyanga noma nsuku zonke, kuya ngenkampani yakho
I-canon yilokho okulawulwa nguhulumeni ukukhuphula noma ukwehlisa intengo yesikweletu sikagesi, yize izinkampani nazo zingafaka izicelo zokunikezwa kule ndawo ukwenza amanani azo akhange kakhulu.
Ngaphandle kwalokho, inani eliguqukayo liyakhokhwa, okuyinkokhelo yamandla asetshenzisiwe, noma abizwa ngamandla akhokhisiwe, kubalwa ngokuphindaphinda:
Amandla asetshenziswe esikhathini sokukhokha (kW ngehora)
Intengo yehora le-Kilowatt
Uzofaka lezi zimali ezimbili, futhi uzofaka imali enjengokuqashwa kwemishini, i-21% VAT kanye no-5% wentela kagesi.
Ibalwa kanjani ingxenye eguquguqukayo ye-invoyisi?
Kusukela ngo-Okthoba ngonyaka odlule, intengo ngehora le-kilowatt iyashintsha, Futhi akusasebenzi njengakuqala, ukuthi indali kagesi ibibanjwa njalo ngekota, futhi yiyo esetshenzisiwe ukubala isilinganiso, ngesibalo esedlule. Manje isilinganiso se-kilowatt senziwa emakethe ye-wholesale ngentengo yehora, futhi kusasele usuku olulodwa kuphela, okungukuthi, kuzoba namazinga e-kilowatt ehora angama-24 esikhundleni selilodwa.
Ingabe kuyakuthinta? Uma unesilinganiso esilawulwayo, ngaphambili esasibizwa nge-TUR, manje i-PVCP, yebo, ngoba kufanele wazi intengo ngehora ngalinye lekhilowatt. Uma usezimakethe zamahhala, cha, kepha uzolahlekelwa yireferensi yokuthi ngabe ukhokha okuningi noma okuncane.
Ukulungisa, ngale ndlela entsha, inani, isilinganiso senziwe ngenani likagesi elizosetshenziswa ngosuku olulandelayo
Kwenziwa isibikezelo sokuthi kungakanani ugesi ozosetshenziswa ngehora ngalinye losuku olulandelayo. Intengo imbozwa ngaphansi kwendali, kanti intengo iyashintsha ngokuya ngehora, okusho ukuthi, uma kunehora elinokusetshenziswa okuningi, kuzoba namabhidi amaningi, futhi intengo yalo izobe iphakeme, kunaleyo yehora elinokusetshenziswa okuncane , okuzobe kushibhile.
Kukho konke lokhu, kuyisihluthulelo ikhawunta 'ehlakaniphile', elinganisa ukusetshenziswa kwehora ngalinye, kepha uma bengenayo, izinkampani zisebenzisa iphrofayli ejwayelekile yokusebenzisa, futhi akunandaba ukuthi udlani nganoma yisiphi isikhathi, njengoba kunenani elikhulu lemindeni eSpain.
Njengoba sesivele sasiqonda isikweletu nokuthi ugesi ubalwa kanjani, kufanele sikhulume ngokuthi ugesi ushibhile nini.
Indlela enhle, uma unesilinganiso sehora, ukuya kufayela le- ikhasi leRed Eléctrica de España, lapho bashicilela khona nsuku zonke amanani ekhilo ngayinye ngosuku olulandelayo, kusukela ngo-20: 30 ekuseni.
Ngokuvamile, lawa ngamahora asemqoka okufanele uwazi, yize ehlukahluka kuye ngokuthi isikhathi seholide noma impelasonto:
Isikhathi esibiza kakhulu kusuka ku-21: 22 pm kuya ku-XNUMX: XNUMX pm
Isikhathi esikahle ngamahora ayisikhombisa kuya kwayisishiyagalombili
Ihora elishibhile ngamahora amabili kuya kwamathathu
Isibonelo, ngesikhathi sokubhala le ndatshana, ukusetshenziswa kwehora ngalinye langaphambilini ngu:
Ihora elibiza kakhulu libiza u- € 0,11 nge-kilowatt ngayinye
Ihora elilungile lithengiswa ngo- € 0,09 kWh
Ihora elishibhile libiza u- € 0,08 kWh
Ngakho-ke, ungahlela ukukhanyisa imishini edla kakhulu ekhaya lakho, njengomshini wokuwasha, i-ceramic hob, ebusika, ukufudumeza, noma ehlobo isimo somoya, njll.
Noma kusezingeni elijwayelekile, amahora asekuseni nasebusuku yizona ezibiza kakhulu, okungukuthi, futhi eshibhe kakhulu amahora okusa, kusuka ngehora lesibili ekuseni.
Kuzoba nezinsuku lapho ihora elibiza kakhulu lingaphezu kokuphindwe kabili kunehora elishibhile, ikakhulukazi ehlobo nasebusika.
Uma unesikhathi nokubekezela ukuhlela ukusetshenziswa kwakho nsuku zonke, lolu hlelo lukulungele, ngoba uzobona ukusetshenziswa komthethosivivinywa kuncishisiwe, okuthi kulokhu, kungabe kusenzeka kabili ngenyanga, kepha njalo ngenyanga.
Okubi kakhulu ukuthi ngeke ukwazi ukwazi ngokuqinisekile ukuthi ukubalwa kwe-invoyisi yakho kulungile noma cha. Yindlela efanayo esesikutshele yona phambilini, kepha ibalwa ngehora ngalinye lesikhathi ngasinye esithunyelwe, okusho ukuthi, izibalo eziyi-1440 nge-invoyisi ephuma kabili ngenyanga. Ubuhlanya bangempela okungekho ngisho ne-Excel engakukhulula kukho.
Isixazululo esizedlula zonke: intela ekhishwa ngokubandlululwa ngehora
Uma ufuna ukonga imali, bese ukhohlwa ngokuhlela uhlelo ngalunye ekhaya lakho, isisombululo esizedlula zonke yi izinga lokubandlululwa ngehora.
Kusho ujuthi hlukanisa usuku lube ngamahora amabili, okusho ukuthi, amahora aphakeme (emini) namahora we-off-peak (ebusuku).
Yize nayo isishintshile, indlela icishe icishe ifane naleyo yangaphambi kuka-Okthoba 2015: isilinganiso sehora esivela kunani eliphansi kakhulu kakhulu kunesilinganiso sehora eliphakeme, futhi kuya ngenkampani ngayinye. Imvamisa isilinganiso esincishisiwe singama-50% eshibhile kunamahora aphezulu.
Amahora we-Off-peak avela ku-23pm kuya ku-13pm ehlobo, futhi kusukela ngo-22pm kuya ku-12pm ebusika.
Inani eliphakeme lisuka ku-13: 23 pm kuya ku-12: 22 pm ehlobo, futhi kusukela ngo-XNUMX: XNUMX pm kuya ku-XNUMX: XNUMX pm ebusika.
Vele, amahora we-off-peak ngeke ahlale eshibhile kunamahora aphezulu, kepha ngokujwayelekile, kunjalo.
Ngokubandlululwa njalo ngehora, uqeda ukungaqiniseki, futhi kulula kuwe kuphela uma ukusetshenziswa kwakho kucishe kube ngu-30% ngaphezulu, okungenani, ebusuku ukwedlula nsuku zonke, nokuthi ukusetshenziswa kwasemini kungalawulwa kakhulu.
Uma ungakwazi ukulawula ukusetshenziswa, kungcono ukuthi uhlale ku- isilinganiso esijwayelekile, nokuthi ubheka ukusetshenziswa kwansuku zonke ukuze wazi isikhathi esikahle sokuvula umshini wokuwasha, okomoya noma okokushisa.
Ukwazi ukuthi ugesi ushibhile nini, ngamafuphi, kuyadingeka ukuthi unamanani entengo ositholile, iyiphi indlela yokukhokha, futhi ubheke inani ngehora le-kilowatt nsuku zonke, yize kuzohlala kusantwela njalo.
Siyethemba ukuthi, ngawo wonke lo mhlahlandlela, uzoba nokwesaba okuncane lapho inkokhelo elandelayo yokusebenzisa kwakho ugesi ifika ekhaya, nokuthi izokwehla kakhulu kunangesikhathi esedlule. Uma unokungabaza okuthile, sincoma ukuthi uqhathanise nezinye izinkampani, amanani noma izinhlobo zokusetshenziswa, ngokuphambene nalokho okucatshangwayo, kunokunikezwa okuningi namanani.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Ilondoloza » Amandla » Ukukhanya kushibhile nini
I-athikili enhle ngaphandle kokungabaza. Ekugcineni, ukubheka lolu hlobo lwento kuwo wonke umuntu kuseseyinkinga ngalokho abantu abaningi "abadlula kukho" futhi baqhubeke nokubeka izinto zabo zokusebenza lapho befuna / bekwazi. Kunamathuluzi akwenzela lo msebenzi.
Izikweletu zokutshalwa kwemali emakethe yamasheya
Izabelo zehliswa ngama-20% emakethe yamasheya